Hetauda Khabar - डा.भट्टराईको आलोकाचोपन
राजु शास्वत लामिछाने, हेटौंडा
नेपाली राजनितीका एक युगपुरुष डा.भट्टराई र नयाँ शक्ति प्रती अगाध विस्वास,प्रेम,स्नेह,सम्मान हुदाहुदै पनि आज पटक्कै चित्त नबुझेर केहि कुराहरु लेख्न मन लाग्यो।उमेरले डा भट्टराई 63 बर्षको मध्यान्तरतिर हिड्दै हुनुहुन्छ ।
उहिले आफ्नो सम्पुर्ण जिबननै देश र समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिमा सकृय भएर बिताउनु भयो।यद्यपि उहाँका पछिल्ला केही गतिबिधिहरु आलोकाचो,अपरिपक्व,अदुरदर्शी र हतासपुर्ण देखिन्छ।नयाँ शक्ति मकवानपुरका अध्यक्ष प्रल्हाद लामिछाने ज्युले भनेजस्तै नयाँ शक्तिका आम कार्यकर्ता रातारात कम्युनिस्ट भए फेरि तिनिहरु केही दिनपछि रातारात काङ्रेसी भए।कि उहाँले वकालत गरिरहनुभयको बामलोकतान्त्रिक भनेको यहि हो त??जता पनि ढल्कने??
मलाई पहिलेनै लागेको थियो। 60-40 को भागबन्डा भैसकेको अबस्थामा उहाँ यत्तिकै बिनयोजना बामगठबन्धनमा जानू भयो।पत्रकार सम्मेलनमा बारम्बार प्रचण्डले जिस्काइरदा भट्टराई शिर नुगेको थियो।यो गठबन्धनमा जानुअघी के भट्टराईले अलिकति पनि हिसाबकिताब गर्नु पर्दैनथ्यो? एमाले र माके को चरित्र थाहा हुदाहुदै पनि अगाडी नै भागबन्डाको छिनोफानो गर्नुपर्दैनथ्यो!? नयाँ नयाँ शक्ति नेपाल को बारेमा सोच्नुपर्ने होइन र ?
कार्यकर्ताको भबिश्य सोच्नुपर्ने होइन र? फेरि रातारात काङ्ग्रेस सङ गठबन्धन बन्यो।। के भट्टराईले केन्द्रीय समितीमा छलफल गर्नुभयो? यो गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो होला कि?? तपाईंका घनिष्ठ हितैसी माके र एमालेमा पो धेरै थिए कि ? भट्टराई ज्यु...........
बिपिको सिद्धांत राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र आत्मसात् गर्ने काङ्ग्रेस अनि तपाईं ? खुमबहादुर र हिन्दुराज्य बादिहरु बर्सच्व रहेको काङ्ग्रेस अनि तपाईंको नयाँ शक्ति !? नयाँ नेपालको संविधान रोक्न खोज्ने काङ्ग्रेस अनि रातारात सम्बिधान जारी गर्ने तपाइ?? तपाइँको कार्यकारी प्रमुख कओ एजेन्डा कहाँ गयो?
काङ्ग्रेस ले नयाशक्तिलाइ कति सिट दिन्छ? दुई कि चार? फेरि बाम गठबन्धन सग किन 15 सिट मागियो? तपाइले गोर्खा छोड्नै नहुने थियो र? सारा नेपालीको राजनेता होइन र तपाईं ? फेरि केही अगाडिको प्रसङ स.स. फो. सङ नयाँ शक्ति लाई किन बिलय गराउन खोज्नु भयो? मानौ तपाइँको भाषामा एकीकरण हो भने अन्त्यमा किन हुन सकेन?? अस्ता कुराहरुले तपाईंको ब्याक्तित्वमा आच पुग्दैन,?
यस्ता केही कुराहरु सम्झदा डा भट्टराईको हतास मानसिकता, अपरिपक्वता,अअदुरदर्शिता रअ कमजोर नेतृत्व क्षमता प्रस्ट देखिन्छ। कुनैपनी पार्टी रातारात बन्ने होइन, यसका लागि निस्चित कालखण्ड र मुभमेन्ट चाहिन्छ।
जनजन सम्म कार्यकर्ता पुग्नु पर्छ। केबल फेसबुके रअ चियाचौतारे तथा एलिटहरुको हातमा पार्टी पुगेको छ। हुनाहार र परिश्रमी कार्यकर्ता निरास छ्न । अन्तमा बाबुराम तपाईंले चुनाव जित्नुपर्छ, आम नेपालीको माग पनि हो। अनेकौं शुभकामना ......